Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Africa na Ghana 2019 na-achịkọta ume
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Egwuregwu » Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Africa na Ghana 2019 na-achịkọta ume
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • News • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Njem nleta bụ ịgafe ókèala maka ahụmịhe. Egwuregwu njem bụ otu ọrụ dị otú ahụ na-eweta ọtụtụ ka ha gafere ókèala ka a gụrụ ha taa dị ka Ndị Nleta Egwuregwu Egwuregwu.
Ntinye nke 2019 nke Egwuregwu Egwuregwu Africa - nke mbụ, njikọta nke Pan-Africa nke ndị nwere oke aka site na egwuregwu na njem nlegharị anya, na-agagharị kwa afọ site n'otu mba Africa gaa na nke ọzọ. Ghana afọ a na atụmatụ abụọ dị mkpa ka akwadoro ịdebanye n'izu ahụ.
Ha bụ Summit Ndị njem nleta na egwuregwu egwuregwu nke Africa na Olympic Roundtable na African Sports Destination Awards. Mgbakọ a ga-ahụ nchikọta nke ọgbakọ ndị otu egwuregwu / kọmitii / kansụl, kọmitii Olympic, kọmitii na-ahazi mpaghara, bọọdụ ndị njem, ndị na-eme njem nleta na ndị ọzọ metụtara ya site na egwuregwu na njem njegharị. Ha ga - abụ echiche ebumpụta ụwa wee gbanwere mmekọrịta, na mpaghara Africa ebe a na - ahụ egwuregwu ma na - abịakwute dị ka njem. Ọ ga - ejide na Oak Plaza Hotels na Accra Ghana, na abali iri-itolu - abali iri-abụọ nke onwa itolu,
N'ime ndị okwu a bụ Juliet Bauwah, Dev Govindjee, Geoff Wilson, Tafadzwa Mapanzure, Abi Ijasanmi na Seyi Akinwunmi.
Juliet Bawuah bụ aha ụmụ nwanyị na egwuregwu n'ofe Africa. Ọ na-anọdụ na ngalaba na-ekpebi CAF African Footballer of the Year. Onye guzobere Summit Ndị Na-ahụ Maka Womenmụaka n'Africa bụ onye ọrụ nke Netherlandslọ Ọrụ Ọzụzụ Radio Netherlands. Ugbu a ọ bụ onye na-akwado egwuregwu bọọlụ n'Afrịka na TRT, ụlọ ọrụ telivishọn ndị isi na Europe na Turkey.
Seyi Akinwunmi bụ onye ọkaiwu nke mechara tinye azụmahịa ya na ndị na-eme njem nlegharị anya. Ọ na-eje ozi dị ka onye isi oche mbụ nke Nigeria Football Federation na Lagos onyeisi oche FA.
Dev Govindjee bụ akụkọ akụkọ egwuregwu South Africa nke gbara na klas mbụ nke 45 maka Eastern Province n'etiti 1971 na 1983. Ya na Council Cricket Council rụkọrọ ọrụ ihe karịrị afọ iri. Ọ bụ ugbu a onye nchịkwa egwuregwu mba ụwa.
Onye otu bọọlụ na Tourism Northern Ireland - Geoff Wilson na-agba ahịa azụmaahịa na nkwukọrịta okwu ya, na-elekwasị anya na egwuregwu. Na mbụ Isi nke Ahịa na Nkwukọrịta (Irish FA), ọ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze, mmemme azụmahịa, mmepe mmepe na nkwukọrịta na ndị Fans.
Geoff na FIFA na-arụ ọrụ dịka FIFA, UEFA, AFC, FIBA ​​na ụlọ ọrụ egwuregwu ndị ọzọ zuru ụwa ọnụ n'ọtụtụ ebe site na atụmatụ atụmatụ, ịre ahịa na nkwukọrịta, dijitalụ, ntinye aka, mmekọrịta ọha na eze na mmemme ịkekọrịta / mgbanwe. Na mgbakwunye, Geoff na-ajụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ egwuregwu na CRM, eSports, ndị nwere ike ịbịara na ndị na-akwado ohere itinye aka. Geoff bụ onye nkuzi oge na azụmaahịa na Mahadum Queen Belfast ma bụrụkwa onye isi oche nke Netball Northern Ireland.
Tafadzwa Mapanzure bụ onye ndụmọdụ ụlọ ọrụ egwuregwu na-ahụ ọtụtụ afọ n'ịzụ ahịa egwuregwu na mpaghara ndịda Africa.
Abi Ijasanmi bụ otu n'ime ndị ọrụ nwanyị mbụ na-akparịta ụka na ụgwọ ọnwa, nkwado na azụmahịa gbasara mgbasa ozi maka ndị egwuregwu bọọlụ US na Europe, Asia na Middle East. Onye ọka iwu na-ahụ maka azụmaahịa nwere ihe karịrị afọ 10 mmepe mmepe azụmaahịa, ọ sonyeere ahịa azụmaahịa Trans-Atlantic dị ka onye na-arụ ọrụ na 1998 yana na 2001 ghọrọ ọrụ maka ịnọchite anya ndị ahịa dị iche iche dị ka Lebanọn, Italytali, Lithuania na France. Nlekọta onye ọkpụkpọ, otu na mmekọrịta mgbasa ozi, na mgbalị ya mere ka ndị egwuregwu nwee ike ịbanye n'ókèala amaghi ma nye iwu ụgwọ ndị ọkachamara.
Abi na-ebute ụzọ maka ndị inyom maka TASM, nke mbụ ụdị ya na Europe. N'inwe ike ịmata ohere ọhụụ na agụụ maka ikike bọọlụ bọọlụ n'Africa, Abi etinyela onwe ya dịka onye nnọchi anya maka ndị na-achụ ego mba ofesi na-elekwasị anya na basketball na kọntinenti Africa. Na 2006, onye ọkpụkpọ ọla edo nke Olympic, Tessa Sanderson kpọrọ oku ọkachamara Abi ka o nye ndụmọdụ gbasara iwu na azụmaahịa ya na ụlọ akwụkwọ egwuregwu ọhụrụ e mepụtara maka egwuregwu London 2012. Ọ bụ onye isi ugbu a maka Africa na DiamondAir International.
N’ikwu okwu na mmemme ahụ, Deji Ajomale-McWord, Onye isi oche nke Egwuregwu Egwuregwu Africa, kwuru na “ebumnuche anyị bụ ịbawanye nnukwu ngwaahịa ụlọ nke mba Africa, site na mmemme egwuregwu na ezumike kacha mma. Egwuregwu ga - abụrịrị nke kacha mma site na ahụmịhe naanị ile ọbịa na njem nleta nwere ike ịme.
Anyị ga-akwaga mba ndị ọzọ dị n'Africa, kwa afọ, na-eduzi alụmdi na nwunye nke egwuregwu na njem nleta, na-echekwa mmekọrịta ịhụnanya ha iji hụ na ọ na-amị mkpụrụ nke uru mmekọrịta akụ na ụba. Isi okwu anyi n’aho a bu ‘Kwado njem njem ndi egwuru-egwu ya na ebum n’uche Sustainable Development’ na anyi ga-akparita isi okwu ndi ozo nke na enye nsogbu n’oriri egwu, gini mere Africa adighi adota ihe omume egwuregwu zuru ezu ma megharia ezumike egwuruegwu n’Afrika ”.
Mgbe a jụrụ ya gbasara onyinye a, Deji kwughachiri na “ọ bụ ezie na ọ mere ihe izizi ya na 2019, African Sports Destination Awards emeela ka ndị mmadụ nwee mmasị na kọntinent ahụ. Ogwe ndị njem na ndị njem na njegharị egwuregwu na-esonye aka na nhoputa na usoro ịtụ vootu.
Emechiela ọnụ ụzọ ịtụ vootu na ndị meriri site na votu sitere na ọha na ndị juri. Anyị ga-ewebata ụfọdụ akara n'ime ụlọ ndị ama ama 'Enyi nke Egwuregwu Egwuregwu', ndị otu ahaziri ahazi nke ụdị, ụlọ ọrụ na ndị na-akwado ihe na-agba ndị mmadụ ume ma na-akpali ha ịhapụ ebe obibi ha ma gaa ebe ndị ọzọ na ụwa anyị, maka ebumnuche egwuregwu.
Ebumnuche anyị bụ isetịpụ akara ngosi dị mma maka ndị egwuregwu n'ime ụlọ ọrụ egwuregwu na-ahụ maka egwuregwu, ebe anyị na-ejikọ egwuregwu Afrịka site na egwuregwu na njem.